‘पाप’ पखाल्न सप्तऋषिको पूजा ! ऋषिपञ्चमीको पूजा गरी सकियो तीज – Nepal's No. 1 Digital Newspaper
‘पाप’ पखाल्न सप्तऋषिको पूजा ! ऋषिपञ्चमीको पूजा गरी सकियो तीज
By डिजिटल खबर Last updated Sep 3, 2019 22 0
१७ भदौ, काठमाडौं । आज ऋषिपञ्चमी पर्व, सप्तऋषिको पूजा गरी मनाइँदै छ । तीजका व्रतालुहरुले भोलिपल्ट सप्तऋषिको पूरा गरी व्रत समाप्त गर्दछन् । ऋषिपञ्चमीको पूजा नगरे तीजको व्रत अपुरो हुने धार्मिक विश्वास छ ।
व्रतालुहरु बिहानै माटो, तिल र अमलाको पिनाले स्नान गरी, एक वर्षको प्रतीककारुपमा ३६५ वटा दतिवनले दाँत माझी, चोखो वस्त्र लगाउँछन् । त्यसपछि मध्याह्न्नमा अरुन्धतीसहित सप्तऋषिहरु कस्यप, अत्री, भारद्वाज, वशिष्ठ, जमदग्नी, गौतम र विश्वामित्रको पूजा गर्दछन् ।
कतिपयले घरमै परिवारका सदस्य र छिमेकीहरु भेला भई पुरोहित बोलाएर सामूहिक पूजा गर्दछन् । कतिपयले भने ऋषिको मन्दिरमा गएर पूजा गर्दछन् । यसै अवसरमा काठमाडौंको टेकुस्थित ऋषेश्वर महादेवको मन्दिरमा आज पूजा गर्नेको घुइँचो लागेको छ ।
सप्तऋषिको पूजा गरिसकेपछि भजनकिर्तन गर्दै नाच्ने चलन पनि छ । ऋषिपञ्चमीमा सप्तऋषिको पूजा गरेमा जानीजानी गरेको वा अन्जानबस गरेको ‘पाप’ सबै नष्ट हुने धार्मिक विश्वास छ ।
Digital KhabarNepalNewsShree PanchamiSongs
‘राष्ट्रिय शिक्षा नीति होइन, ‘सरकारी शिक्षा नीति’ बनाउने काम भयो’
इसरोले इतिहास रच्यो , ऑर्बिटरबाट ल्याण्डर सेप्रेट गरियो, अर्को ठूलो चुनौती अझै बाँकी